ဖြစ်ရပ်မှန်စစ်ဆေးမှု - Vandelay အသံတင်ပို့မှုနှင့်ပါ ၀ င်သည့် Lectrosonics | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » အဖြစ်မှန်စစ်ဆေးမှု: Vandelay အသံတင်ပို့မှုနှင့်အတူသတ်မှတ်မည်အပေါ် Lectrosonics
Dallas မြို့, တက္ကဆပ်(သြဂုတ်လ 20, 2019) - Dallas မြို့နှင့်အတ္တလန်တာအတွက်ရုံးများနှင့်အတူ Vandelay အသံပို့ကုန်အဖြစ်မှန်ရုပ်မြင်သံကြားအတွက်အထူးပြု go-မှတည်နေရာပြသံကိုကုမ္ပဏီတိုစာရင်းကိုတက်ခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သောရှိုးစောင့်ကြည့်မယ့်သူမည်သူမဆိုသိတယ်အဖြစ်သူတို့သွန်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့်ထို့ကြောင့်ကြိုးမဲ့အော်ဒီယိုချန်နယ်တွေအများကြီးအများကြီးပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ ဒီစိန်ခေါ်မှုမှမြင့်တက်မှုအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း Tyler Faison နဲ့ Jack Cline ရဲ့ရွေးချယ်မှု SMV နှင့် SMQV ကျစ်လစ်သိပ်သည်းက transmitter, SSM မိုက်ခရိုက transmitter, အ WM watertight transmitter ကို, src နှင့် UCR411a အသံဖမ်း, အထူးသဖြင့်သစ်ကို SMWB နှင့် SMDWB wideband က transmitter အပါအဝင် Lectrosonics ဒစ်ဂျစ်တယ် Hybrid ကိုWireless®ဂီယာဖြစ်ပါတယ် ။
"ကျနော်တို့ကကိုယ့် Oprah Winfrey ရဲ့ကွန်ယက်ကိုတစ်ပြသ၏ဒုတိယရာသီပတ်ရစ်," ဂျက် Cline ကပြောပါတယ်။ "အတိတ်ကာလ၌, ငါ Little ကအမျိုးသမီးများဂိမ်းနှင့် Pitbull & Parolees များအတွက်အသံကြီးကြပ်င့်နှင့် Tyler အမည်ဖြင့်အနည်းငယ်ရန်, ငါးခူ၏ပထမဦးဆုံးအများအပြားရာသီကိုပြု၏။ ကျနော်တို့ High-end အဖြစ်မှန်ကိုပဌနာဘာအထူးပြု။ ကာလ၌ရှိသကဲ့သို့, ငါတို့မျိုးစုံအသံအိတ်လိုအပျကွောငျးဤမျှလောက်များစွာသောသွန်းအဖွဲ့ဝင်များရှိပါတယ်။ "
"ကျနော်တို့ကကိုယ့်ကိုတစ်ကြိမ်မှာ run နေသည့်အခွက်တဆယ်ဘို့ကြိုးမဲ့၏ 24 လိုင်းများကဲ့သို့အများအပြားရှိသည်, ပေါင်း IFBs နှင့်ကင်မရာ hops," Tyler Faison ကထပ်ပြောသည်။ "ဒါကြောင့်တကယ် Lectrosonics ဂီယာကြိမ်နှုန်းညှိနှိုင်းအတူဒါအမြန်ကြောင်းကူညီပေးသည် - ငါတို့သည်မဆိုရိုက်ကူးမတိုင်မီတစ်ဦးကြီးတွေပတ်ပတ်လည်ကိုပြုရသော။ အဆိုပါ wideband နှင့်အတူပြုလုပ်မျိုးစုံအကြိမ်ရေလုပ်ကွက်ကိုဖြတ်ပြီးမျိုးစုံမှတ်တမ်းတင်အိတ်ဖြန့်ဖို့အများကြီးပိုလွယ်ခဲ့ရဲ့။ "
တစ်ဦးအဖြစ်မှန်ပြပွဲအပေါ်အဖွဲ့ဝင်များကသို့ကာစ် - အထူးသဖြင့်မည်သည့်အရာအတွက်မျိုးစုံမဟာမိတ်ဖွဲ့, အချစ်သီချင်းများနှင့်ရန်ငြိုးပြိုးနပွေီကြသည် - အများကြီးကွဲပြားခြားနားသောပေါင်းစပ်အတွက်အပြန်အလှန်။ အဆိုပါ wideband SMWB နှင့် SMDWB က transmitter ကပိုမိုလွယ်ကူရလဒ်များကိုမှတ်တမ်းတင်စေအဘယ်ကြောင့် Cline ရှင်းပြသည်။ လူတကျိပ်နှင့်ဆယ်အမျိုးသမီးတွေ: "ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာ 20 ခွက်တဆယ်အဖွဲ့ဝင်များရှိတယ်ဆိုပါစို့။ ထိုသို့ပြုမှအဟောင်းကိုလမ်းကျနော်တို့အကြိမ်ရေပိတ်ပင်တားဆီးမှု 19 နှင့်ပိတ်ပင်တားဆီးမှု 20 ပေါ်မှာရှိသမျှ gals ပေါ်မှာရှိသမျှယောက်ျားတွေထားချင်ပါတယ်, ဖြစ်ခဲ့သည်။ အသီးအသီးအိတ်တှငျကြှနျုပျတို့ပိတ်ပင်တားဆီးမှု 19 များအတွက်အသံဖမ်းလေးလိုင်းများနှင့် 20 အဘို့အလေးပိုရှိသည်ချင်ပါတယ်။ တဦးတည်းလိင်၏ငါးကြိမ်ခြောက်လူတို့သည်မိမိတို့ကျောနောက်သို့ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်အကြောင်းကိုစကားပြောနေကြသည်ဘယ်မှာဆိုတစ်ဦးမြင်ကွင်းတစ်ခုရှိတယ်မှီထိုအကြောင်းအရာရှိသမျှကောင်းနှင့်ကောင်းပါတယ်!
"ဟုအဆိုပါ wideband ပစ္စည်းပစ္စယနှင့်အတူယခုကြှနျုပျတို့သူတွေကိုတူညီတဲ့သွန်းအဖွဲ့ဝင်များအတွက်လုပ်ကွက် 470, 19 နှင့် 20 ဖြတ်ပြီး coordinate" ဟုသူကဆက်လက်ရေးသားထားသည်။ "ကျနော်တို့ကတတ်နိုင်သမျှအသန့်ရှင်းချန်နယ်လ်ရ။ ထို့နောက်အပေါငျးတို့သအိတ် wideband ပေါ်တက်ခူးရာ src အသံဖမ်း, တပ်ဆင်နေကြသည်။ ဒါကလမ်း, ငါတို့မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုအိတ်ကနေမဆိုသွန်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးရဲ့ transmitter ကိုသို့ညှိလို့ရတယ်။ "
"ဒါကကျနော်တို့က transmitter ဖလှယ်ဖို့အတွက်ခုန်နေဖြင့်တခဏကြားဖြတ်ရန်မလိုပါဆိုလိုတယ်," Faison ရှင်းပြသည်။ "ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်အကောင်းတစ်သံကိုယာဉ်အမှုထမ်းများ၏ရည်မှန်းချက်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်အခွက်တဆယ်ကိုသင်ပင်ရှိနေမေ့လျော့ရှိသည်ဖို့, မမြင်ရတဲ့ဖြစ်ရမည်။ ပိုကြောင်းဖြစ်ပျက်, ပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ကကျွန်တော်ကိုသူတို့မလာမယ့်ပြပွဲပေါ်တွင်ပထမဆုံးဖုန်းခေါ်ဆိုမှုဖြစ်လိမ့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်! "
အဖြစ်မှန်တီဗီနေ့စဉ်ဘဝကတဆင့်ပတ်ပတ်လည်သွန်းအဖွဲ့ဝင်များကအောက်ပါအတိုင်းကတည်းကတစ်ခုမြင်ကွင်းပေါ်ရှိစိတ်ဓါတ်များကြားဖြတ်နိုငျသောအခြားအချက်တစ်ချက်က transmitter အတွက်ဘက်ထရီကိုပြောင်းလဲရန်လိုအပ်ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်မှုကနေတဆင့်အိပ်မှသူတို့ကိုထည့်ထားနိုင်ပါတယ် "နှင့်ပဲလူသတ်သမားရဲ့: Faison အဆိုပါ SMWB နှင့် SMDWB အဲဒီလိုလုပ်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းလျှော့ချရှိသည်ဟုမှတ်ချက်ပြုထားသည်။ တစ်ဦး transmitter ကိုနက်ရှိုင်းသူတစ်ဦးဦးရဲ့ဗီရိုအတွင်းမှသင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံလျှင်, ငါတို့သည်ဖြစ်ကောင်း dual-ဘက်ထရီဗားရှင်းဖြစ်သော SMDWB နှင့်အတူသွားရလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့အခါကင်မရာများလိပ်ထို့နောက်အပေါငျးတို့သအခွက်တဆယ်သို့မဟုတ်ထုတ်လုပ်သူများအနှောက်အယှက်မရှိဘဲ, ကနိုး, ဘက်ထရီသက်တမ်းရှည်အောင်မှအိပ်ပျော်စောင့်ရှောက်နိုင်တယ်။ "
မည်သည့်လက်တွေ့ဘဝကို TV ပရိတ်သတ်ကိုသိသကဲ့သို့, ဗီရိုလည်းအထူးသဖြင့်ကမ်းခြေမှာသို့မဟုတ် poolside မြင်ကွင်းများဘို့, skimpy ရနိုင်သည်။ Cline သည့်အလွန်သေးငယ်သော SMV နှင့် SSM က transmitter ဒီမှာလှည့်ကွက်မတွေ့။ "ဒီအခွက်တဆယ်ကိုသူတို့အများဆုံးသဘာဝကျကျဆောင်ရွက်ရန်အသံပစ္စည်းကိရိယာများဝတ်ဆင်နေမေ့လျော့နိုင်ပါလိမ့်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ " ဟုသူကရှင်းပြသည်။ "ဒါပေမယ့်အဲဒီမှာဒီလည်းကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်အချိန်များဖြစ်ကြောင်းနှင့်တစ်စုံတစ်ဦးနေဆဲအပေါ်၎င်းတို့၏ရေနံတူးစင်နှင့်အတူရေကူးကန်သို့ခုန်! အဲဒီမှာအများကြီးကျွန်တော်အမှုအတွက်မိုက်ကရိုဖုန်းအကြောင်းကိုလုပျနိုငျပါဘူး, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်သူတို့ကိုရေ၌သွားကြသည်ကိုသိလျှင်ရေစိုခံ WMS စုံလင်! "
ထိုနေ့၏အဆုံးမှာ Lectrosonics မှ Vandelay ရဲ့သစ္စာရှိမှုကဆင်းအသံအရည်အသွေး, ကြာရှည်ခံမှုနှင့်အသုံးပြုမှုလွယ်ကူခြင်းထံသို့မရောက်ရ။ "ငါသည်အတိတ်ကာလကအခြားဂီယာအသုံးပြုခြင်း၏ကံဆိုးတောင်းဆိုချက်များကိုဆက်ဆံပါတယ်," Faison ကပြောပါတယ်။ "ကံကောင်းထောက်မစွာ, ငါတို့သည်ယခုအဲဒီလိုလုပ်ဖို့ငြင်းဆန်နိုင်ပါတယ်ရှိရာအမှတ်တစ်ဦးဂုဏ်သတင်းကိုတညျဆောကျပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Non-Lectrosonics ဂီယာတွေအများကြီးကိုရောင်းပါတယ်, နှင့်ငါတို့သည်လည်းပစ္စည်းကိရိယာများကုန်သည်တွေနေကတည်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုင်, မှီခို Expendables မှာအကြံပြုပါသည်။ အဆိုပါ user interface ကိုနိုင်အောင်ထိုးထွင်းသိမြင်သည် ဖြစ်. , ကြာရှည်ခံမှုအဘို့ကျနော်တို့တဆယ်နှစ်ကျော်များအတွက်လည်ပတ်အတွက်အချို့သောအပိုငျးပိုငျးခဲ့ပြီးပြီသူတို့ကတော့ခိုင်မာနေဆဲတာပေါ့။ "
"ငါသည် Tyler ရုံကပြောပါတယ်အရာအားလုံးကို echo လိမ့်မယ်," Cline ကထပ်ပြောသည်။ "ကျနော်တို့ရှိပါတယ်တော်တော်လေးသိပ်သည်အခြားကြိုးမဲ့အမှတ်တံဆိပ်ကိုအသုံးပြုပါတယ်ထင်ပါတယ်။ ငါထွက်ညွှန်ပါလိမ့်မယ်အရာတစ်ခုမှာငါမပြုမီအသုံးပြုသောဘယ်တော့မှင့်သစ်တစ်ခု Lectrosonics ထုတ်ကုန် get လျှင်အဘယ်သူမျှမသင်ယူမှုကွေးရှိပါတယ်ဖြစ်ပါသည်။ ငါကအခွက်တဆယ်ပေါ်တွင်တင်ပါကတစ်ဦးဘက်ထရီ ထား. , box ကိုအထဲက ယူ. , အလိပ်။ ဒါဟာစာသားကြောင့်အမြန်ပါပဲ။ ကြမ်းတမ်း, အသံအရည်အသွေး, နှင့်ယေဘုယျအသုံးဝင်မှုရှိစေရန်, ကြှနျုပျတို့အမြဲပြန် Lectro ထံသို့လာပါတယ်။ သင်ရုံကရိုက်နှက်လို့မရပါဘူး။ "
Vandelay အသံပို့ကုန်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ vandelaysoundexports.com ။ နှင့်မှီခို Expendables မှာ မင်္ဂလာပါ.
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor Lectrosonics lectrosonics ဒစ်ဂျစ်တယ်စပ်ကြိုးမဲ့နည်းပညာ လက်ခံ က transmitter တီဗီနည်းပညာ က Ultra HD ဖိုရမ် vandelay သံကို ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် ကြိုးမဲ့ 2019-08-20
ယခင်: ရော်ဂျာနှင့် Big စက်ကုမ္ပဏီနှစ်ခုမပေါင်းကြေညာ
နောက်တစ်ခု: JDI @ အငယ်တန်းဒီဇိုင်နာ